Hlola iGlasgow, eScotland - World Tourism Portal
Hlola iGlasgow, eScotland
Yini ukubona. Izindawo zokudlela ezihamba phambili ezihamba phambili e-Glasgow, eScotland
Okufanele ukwenze eGlasgow, eScotland
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeGlasgow
Bukela ividiyo ngeGlasgow
Hlola iGlasgow okuyinto idolobha elikhulu kakhulu ngaphakathi Scotland, ngesibalo sabantu cishe i-600,000 edolobheni uqobo, noma ngaphezulu kwezigidi ze-2 uma amadolobha asondelene nomhlangano waseClydeside ebhekwa. Kusendaweni engasentshonalanga kweCentral Belt yaseScotland osebeni loMfula Clyde, ukubaluleka komlando kaGlasgow njengesikhungo sezimboni esikhulu saseScotland kuye kwabekelwa inselelo ngamashumi eminyaka woshintsho nemizamo ehlukahlukene yokuvuselelwa komhlaba. Idolobha lesithathu ngobukhulu kulo lonke elase-United Kingdom (ngokwesibalo sabantu), lihlala lisesinye sezikhungo ezibalulekile zezomnotho zezwe ngaphandle London.
Eminyakeni yamuva nje, uGlasgow unikezwe izihloko zaseYurophu zeCity of Culture (1990), iCity of Architecture and Design (1999) ne-Capital of Sport (2003). E-2008, iGlasgow yaba idolobha lesibili leScotland ukujoyina uhlelo lwe-UNESCO Creative Cities lapho ibizwa ngokuthi yi-UNESCO City of Music (ukujoyina iBologna kanye Seville). Ukulungiselela ibhidi lawo, iGlasgow ibala isilinganiso semicimbi yomculo we-130 ngesonto ukusuka esontweni nasema-rock kuya kumculo weCeltic ne-opera.
Idolobha seliziguqukele ekubeni yindawo enamandla enkulu yezimboni zaseBrithani yaba isikhungo sezohwebo, ezokuvakasha namasiko. IGlasgow bekungumuzi ophethe imidlalo yamaCommonwealth Games e2014.
IGlasgow isibe ngelinye lamadolobha avakashelwa kakhulu eBritish Isles, futhi izivakashi zizothola isikhungo sedolobha esivuselelwe, okuyindawo ethenga kakhulu ngaphandle London ngaphandle kokungabaza, amapaki amahle kakhulu neminyuziyamu (iningi lawo likhululekile), nokutholakala kalula ezindaweni eziphakeme naseziqhingini.
Indawo ezungeze iGlasgow ibambe imiphakathi ngeminyaka eyizinkulungwane, kanti uMfula Clyde uhlinzeka indawo yemvelo yokudoba. AbaseRoma kamuva bakha izindawo ezakhiwayo kuleyo ndawo futhi, ukuze amaRoma Britannia ahlukane neGaelic nePictish Caledonia, bakha i-Antonine Wall, izinsalela zayo ezingabonakala namuhla eGlasgow. IGlasgow uqobo lwasungulwa isithunywa sevangeli esingumKristu uSanta Mungo ngekhulu le-6th. Wasungula isonto eMolendinar Burn, lapho ikhona khona iSonto LaseGlasgow, kwathi ngeminyaka elandelayo iGlasgow yaba isikhungo sezenkolo. Igama laso lisuselwa eGaelic Glas chu elihumusha ngokwezwi nezwi ngokuthi “hole oluhlaza”; phakathi namakhulu eminyaka lokhu kuye kwenziwa ngezifiso zisho “indawo ethandekayo eluhlaza” okuvame ukubizwa ngayo njengesidlaliso sedolobha.
Isikhungo sedolobha laseGlasgow
Kunama-nightclub amaningi, amakhonsathi nemikhosi e-Glasgow.
UGlasgow ubedume ngendawo yakhe yomculo okungenani iminyaka engu-20, ngezenzo ezithile eziphezulu ezivele zigqame ukuzodlala ezindaweni ezinjengeBarrowlands noma iKing 'Tuts. Kunezindawo eziningi lapho ungabona khona ibhendi enhle (namabhendi amaningi amabi nawo); nganoma yiluphi usuku lwesonto kufanele okungenani kube nemibukiso eminingana ongayikhetha kulo lonke idolobha, futhi inani liyanda liya ezinhlobonhlobo ezikhudlwana ngoLwesine, uLwesihlanu nangoMgqibelo. Ngokungahlelekile, lapha kulandela ezinye izindawo ze-pop / indie / rock-based:
Ubuciko Nezindawo zemidlalo
IGlasgow Royal Concert Hall, eSauchiehall Street (eseduze kweSitimela: Umgwaqo iBuchanan). Leli yikhaya leRoyal Scottish National Orchestra, elinye lama-orchephas aseYurophu ahola phambili. Iphinde ikhiqize uMkhosi weCeltic Connection odume umhlaba wonke njalo ngoJanuwari.
IRoyal Scottish Academy of Music and Drama (RSAMD), 100 Renfrew Street, ngokuyinhloko ikolishi lokufundisa kodwa futhi ifaka imisebenzi yaseshashalazini neyomculo. Ifaka umculo wanamuhla, umdanso wanamuhla ne-jazz.
I-Theatre Royal, 282 Hope Street, yaqala ukuvulwa ku1867. Ibeka ikakhulu imidlalo yaseshashalazini 'engathi sína', i-opera ne-ballet.
I-Tron, i-63 Trongate, ibheka imisebenzi yanamuhla.
ISt Andrews esigcawini, iSt Andrew's Square, isonto elibuyiselwe le18th century yaphenduka indawo yezobuciko. Kubeka emculweni we-classical kanye nakubantu.
ICitizens Theatre, i-119 Gorbals Street, ingesinye sezeshashalazi esidume kakhulu emhlabeni, futhi yethule imisebenzi yezinkanyezi eziningi zama-movie aphesheya kwezilwandle. Ikhethekile emsebenzini wesimanje nowokuphapha kwegarde.
I-King's Theatre, i-297 Bath Street, yaseshashalazini enkulu 'yendabuko' yaseGlasgow. Ingaphezulu kweminyaka engu-100, futhi phakathi kokulungiswa kabusha okukhulu.
IPavilion, i-121 Renfield Street, ukuphela kwendawo yemidlalo yeshashalazi engaphakathi Scotland. Yasungulwa e-1904 futhi yabona izinkanyezi eziningi ezinkulu kakhulu zehholo lomculo ezenza lapho: kakhulu uCharlie Chaplin. Kulezi zinsuku inezeshashalazi ezidumile 'ezithandwayo', umculo kanye namahlaya.
IPanopticon Music Hall, e-Argyle Street, eTrongate, iyihholo lomculo elidala kunazo zonke emhlabeni (lavula nge1857). Ibuphethe kahle kakhulu ukusebenza kwesibalo sikaStan Laurel (wodumo lukaLaurel noHardy) kwi1906. Manje ikhombisa imibukiso yehholo lomculo ikakhulukazi: isib. Imilingo, i-burlesque nehlaya, kodwa futhi ngezikhathi ezithile ifaka umculo we-classic nowomhlaba.
Oran Mor 731 Great Western Road. Indawo yokudlela, i-pub, i-nightclub, inkundla yemidlalo kanye nomculo. Ngenxa yokuvula kwayo sekwedlule isikhathi, le ndawo manje isisenhlanganweni yesakhiwo senhlalo saseWest End.
Umkhosi weGlasgow International Jazz Festival ubanjwa minyaka yonke ngoJuni. Eminye imikhosi yezobuciko noma yomculo obhalwe phansi ifaka i-West End festival, Merchant City Festival nabanye abaningi. Njengasikhathi sonke, thintana nohlu lwamaphephabhuku Uhlu ngemininingwane engaphezulu.
Yini ongayithenga eGlasgow
Idolobha liwine isihloko esithi "I-Curry Capital yaseBrithani" iminyaka emibili ligijima futhi linohlu olukhulu lokudla lwe-zokudlela, amaNdiya noma okunye. Ngaphandle kokuthi iGlasgow iyidolobha lasekhaya leqhawe elisondelayo uGordon Ramsay, azikho izindawo zokudlela ezinhle ezinenkanyezi eMichelin edolobheni (Indawo yokudlela eyodwa enenkanyezi yaseGlasgow, i-Amaryllis - ephethwe nguRamsay ngokwakhe - ifakwe ngamahloni ku-2004) kubhekwa ukudla kwasemzini. Izindawo zokudlela ezingezansi kungenye yezindawo ezinhle kakhulu ze-Glasgow.
I-Glasgow ithathe ukudla okuningi okungafani namasiko futhi yakuhlanganisela isipiliyoni sokudlela esiyingqayizivele. Iningi lokuthathwa linikeza izitsha zaseNdiya (i-pakora), ipizzas kanye ne-kebabs kanye nezinhlanzi zendabuko ezinama-chip and chips noma ama-burger. Lokhu kuholele kokunye kokuthathwa okunikezela ngokuxutshwa kwezitsha ezinjenge-chip nge-curry sauce, i-pizza yomnikeli we-kebab, i-pizza eshaywayo nejulile ethosiwe ukubiza abambalwa.
I-Fish & Chips (aka "Fish Supper") iyintandokazi yaphakade, futhi kukhona inani elinempilo lezitolo nezinhlanzi eziseduze nedolobha. Njengoba kunikezwe ukuthandwa okudumile kweGlasinan nganoma yini ethosiwe ejulile - izikhungo "ezimbi" azivame ukuhlala isikhathi eside.
Njengoba kufanele idolobha eliyitheku, iGlasgow idlondlobala ekudleni kwasolwandle nasezinhlanzini.
Ama-Pubs angamagumbi wokuhlangana we ScotlandIdolobha elikhulu kunawo wonke futhi izingxoxo eziningi eziphilayo zingazwakala kubha ye-Glasgow. Akukho lutho ama-Glaswegians athanda ukudlula “ukubeka izwe ngqo” ngaphezulu kwepiki (noma amathathu), noma ngabe yi-Old Firm, inkolo, isimo sezulu, ezepolitiki noma ukuthi amaholide alo nyaka ahamba kanjani. Uqinisekiswe ukwamukelwa okufudumele okuvela kubantu bendawo, abazokwakha ingxoxo kungekudala.
Kunezindawo ezintathu (noma eziphikisanayo, ezine) zokuphuza eziyisisekelo: lezi zinhle nezindawo zokudlela. Okokuqala, kukhona iWest End (indawo ezungeze iByres Road ne-Ashton Lane), okwesibili kukhona ukwelulwa kukaSauchiehall Street phakathi kokuphela kwendawo ehamba ngezinyawo (eduze kweNdlovukazi Street Station) neCharing Cross (kanye nemigwaqo eyahlukene kule ndawo. ). Okwesithathu kuneDolobha Merchant, eliseduzane nasekolishi laseStrathclyde University. Le yindawo 'ephezulu kakhulu' ongaphuza kuyo futhi udle kuyo, yize isene-dives yabafundi abaningi: qala e-University of Strathclyde bese uzulazula ubheke eTrongate (ingxenye engasentshonalanga yaleli dolobha iyindawo yezitabane). Ukuhlala enkabeni yedolobha, kukhona namagugu ambalwa afihliwe ngaphakathi nasezindaweni ezisondelene neBlyththwood Street kanye nemigwaqo ephakathi kweHope Street neCharing Cross: lokhu okuyisifunda sehhovisi ledolobha yize kunjalo kungazizwa kushiywe isikhathi kusihlwa nezimpelasonto. Ekugcineni, futhi phezulu nokuzayo, yiSouth Side (ie iNingizimu yeClyde). Lokhu bekuvame ukuba kakhulu 'ngemuva kwezikhathi' ezikhulunywa ngomphakathi, kepha ukufuduswa kwe-BBC kuyiwa eSouth Side nendawo yonke evame ukuhambisa 'upmarket' kuye kwathuthukisa izinto kakhulu. Zama indawo eyi-Shawlands Cross yendawo yokudlela, imigoqo kanye ne-The Shed nightclub.
Xwayiswa yize ngamakhodi wokugqoka, ikakhulukazi kwezinye izikhungo ezisezingeni eliphakeme enkabeni yedolobha naseWest End: izembatho zemidlalo nabaqeqeshi (ama-sneaker) zivinjelwe, kanti abanye abasebenzi basemnyango “bayazikhethela” ukuthi ngubani ovunyelwe ukungena, nge-arcane "Uxolo, ilawula izinqubomgomo zokungena kuphela" abangasoze bazichaza. Uma ubhekana nalokhu, thatha isiko lakho kwenye indawo. Uhlobo olujwayelekile lwe- “boozer” alunazo amakhodi wokugqoka, kodwa amahembe webhola (kungakhathalekile ukuthi ithimba) acishe avinjelwe kuwo wonke umhlaba: ikakhulukazi ngezimpelasonto. Umthetho owodwa okufanele uqaphele ukuthi amanye amaklabhu nama-upmarket pubs asebenzisa umgomo ongabhaliwe wokungavumeli amaqembu wonke amadoda abesilisa abangaphezulu kwabane. Ngalesi sizathu, kungakuhle ukuthi uhlukane ube ngamaqembu amabili noma amathathu. Amanye ama-pubs e-Glasgow abuye futhi abe yisinxephezelo sabathandi bebhola lakwa-Old Firm: futhi, lezi zizobe zigcwele kakhulu ezinsukwini zebhola, zingathola umugqa omkhulu, futhi kufanele zigwenywe. Ngenhlanhla kulula ukubona; ngokwesibonelo, iqembu elikhulu lama-Celtic-based pubs likhona endaweni yeBarrowlands, kuyilapho imigoqo eyodwa noma amabili kuPaisley Road West angathandwa ngabalandeli beRanger.
IGlasgow inezinketho eziningi ze-whisky, noma eziningi kungenzeka zingabonakali ngokushesha kumvakashi odlulayo.
IBath Street inezinto ezihlala ziguqukela “zemishayo yesitayela”, eziba ziningi njengoba ukhuphuka usiya esifundeni sezimali eBlythswood Hill. Ikhwalithi iyahlukahluka ngokuya ngokunambitheka kwakho nokubekezelelana.
Uma ungathanda ukunambitha i-Glasgow yangempela futhi uhlanganyele engxenyeni ethile yesiko elingaphandle eliyimfihlo, zama esinye seziphuzo zikazwelonke ezingekho emthethweni esithandwa futhi sabongwa ngamaScot. Lokhu mhlawumbe kungokwesibili (i-Whisky eyokuqala) enethonya kakhulu, kepha akubalulekile kangako, isiphuzo esithole emazweni amahle aqukethe iGlasgow futhi empeleni, lonke iScotland. Le yi-Buckfast Tonic Wine eyodwa futhi okuwukuphela kwayo. Eyaziwa ngama-pseudonyms amaningi iBucky, iTonic, iSauce noma iWreck the Hoose Juice. Indlela engokwesiko yokudla lesi siphuzo ukuhlangana epaki bese uyithululela phansi ngaphambi kokuthi kufike u-'Polis 'noma ngokuqongelela iqembu labantu abazibambile bese uzulazula ngomzila wokuthula omnyama ebumnyameni, okungcono uma lina. Kunokwehluka okuningana kwesifunda kokusetshenziswa futhi; Amanye amaqembu ahlanganisa i-Buckfast yawo neMabele enza i-concoction ye -world eyaziwa njenge- "Buck-Shake" noma kwesinye isikhathi i "Buck-kakke". Abanye bengeza iziphuzo ezithambile ze-caffeine, baqhubeka nokunezela kokuqukethwe kwekhofi ye-wayini. Yize lezi ezinye zezindlela zendabuko zokusebenzisa i- “Tonic” ngendlela evame kakhulu abantu bakhetha ukusebenzisa iwayini ukuthi bahlale eflethini noma engadini ngosuku oluhle olunqabile, ngamaphinifa abo, ngebhodlela ngalinye (e- ubuncane) bese uyiphuza uyiqonde ngqo ebhodleleni.
Njengoba isikhungo sedolobha nemigoqo yeWest End iya ngokuya ihlanjululwa ngokwengeziwe, kususwa isikhonkwane futhi kubhekelwa izivakashi, ukuthola “inkomba” yendabuko eGlasgow kuya kusiba nzima. Kumvakashi ofuna ukwenza umzamo, angaba yizindawo ezinhle zokuthola lokho abaningi abangakubiza ngokuthi yi- “real” Glasgow, iGlasgow lapho amaGlaswegians ahlala khona. Enye inzuzo ukuthi izindleko zokuphuza imvamisa ziyabiza kakhulu. Umqondo ojwayelekile kufanele ukutshele ukuthi yiziphi okufanele uzame, nokuthi yini okufanele uzigweme!
Uma uhamba ne-laptop khona-ke uzothola ukufinyelela kwe-intanethi nge-Broadband emakamelweni iningi, kodwa hhayi wonke, amahhotela aphakathi naphakathi. Uma lokhu kubalulekile kuwe, hlola ngaphambi kokubhuka. Ngenye indlela, kunezindawo eziningi ezishisayo zeWi-Fi ngaphakathi naseGlasgow neWiFinder enikeza irejista.
Hlola i-Glasgow, Scotland kodwa futhi phuma ukuze ubone ukuthi yini eduzane neGlasgow